သူမရဲ့ အိမျမကျ ထဲမှာ နိုငျငံရပျခွားက ဘုရားဖူးမွျောရ တဲ့ ထူးခွားတဲ့ ဖွဈရပျကို ပွောပွလာတဲ့ ခငျရူပ – Shwe Likes
သူမရဲ့ အိမျမကျ ထဲမှာ နိုငျငံရပျခွားက ဘုရားဖူးမွျောရ တဲ့ ထူးခွားတဲ့ ဖွဈရပျကို ပွောပွလာတဲ့ ခငျရူပ
ပရိသတျွ ကီးရေ ခငျရူပကေ တာ့ မျောဒယျ လျလော ကမှာ အောငျမွငျခဲ့ တဲ့ သူဖွ ဈတဲ့အပွငျ အလှမယျ တဈယောကျ အဖွဈလညျး လူသိ မြားခဲ့တာပါ။ အနုပညာအလု ပျတှေ ကိုအခုခြိ နျမှာ ရပျနားထားတဲ့ ခငျရူပက တော့ အိမျထောငျသ ညျဘဝနဲ့ေ အးခမျြးစှာနထေို ငျနသေူပါ။
လကျရှိမှာေ တာ့ ထူးခွားတဲ့ သူမရဲ့အိမျမကျအကွော ငျးကို ပရိသတျေ တှကို ပွောပွခဲ့တာပါ။”Singapore မှ မိတျဆှမြေား ရှငျ.ထူးဆနျးတာလ ညျး အရမျးပါ..ခုလညျး ဘယျလိုလုပျရ ငျကောငျးမ လညျး အကူအညီေ တာငျးတာပါနျော..လှနျခဲ့တဲ့ ၂ ရကျလောကျက အိပျမကျ မကျပါတယျ…သခြောပွောရရငျ တခြို့ story လိုပါထငျနိုငျေ လာကျတာမို့မပွောေ တာ့ဘူးနျော 😅 highlight လေးဘဲပွောပါမယျ”
“Singapore က လေးမကျြနှာဘုရားေ ရှ့မှာ ကိုရငျ(သို့)ဘုနျးကွီး ၂ပါးကို သင်ျကနျးကပျပေးရမယျ” လို့ ထငျထငျ ရှားရှားကွီးမိနျ့ သှားတာပါ .. ပုဂ်ဂိုလျတော့ မပွောေ တာ့ပါဘူး..အာ့နဲ့ Sg မှာ လေးမကျြနှာဘု ရားရှိမ ရှိစုံစမျးတော့ ရှိတယျပေါ့နျော.. ဒါမယျ့ ရူပအိပျမကျ ထဲကလို လေးမကျြနှာ ဘုရားရှမှေ့ာ ကပျလို့ရနိုငျ ပါ့မလားဟငျ?
ဘုနျးကွီးကြောငျး နဲ့နီးတဲ့ နရောလညျး တှထေ့ား ပါတယျ .. ဘုနျးဘုနျးတှေ ကို ပွောပွပေးပွီး အကူအညီတောငျးလို့ ဖွဈနိုငျပါ့မလားပေါ့နျော… Sg ဆိုတော့ ဘယျလိုဘယျ ဝါအထာ ရှိမှနျးရူပလညျး မသိဘူးရယျ 😞
ပွညျတှငျး မှာသာဆိုရူပ ပွေးသှားပွီး အကူအညီတော ငျးမိမှာပေါ့နျော.. အရငျအခွအေေ နသာဆို ကမြ ticket ဖွတျပွီး ပွေးသှား လိုကျပါပွီ 😞 ခုတျောတျော စိတျဒုက်ခရော ကျတယျ သှားမရသေးတော့ ..ဘယျသူမြားဒီအိမျမကျကို လြှောကျထားပေးပွီး လေးမကျြနှာ ဘုရားေ ရှ့မှာကပျလှူခှ ငျ့ ရဖို့ ကူညီပေးနိုငျမလညျးရှငျ?
မလှယျကူလညျး အားမနာပါနဲ့နျော.. ရူပ က အားနာ ရမှာပါ…အဲ့လို မြိုး ကပျလို့မရဘူး ဆိုရငျတော့ ခုသိထားတဲ့ လေးမကျြနှာ ဘုရားတညျရှိရာ နဲ့ နီးတဲ့ ဘုနျးကွီးကြောငျး မှာဘဲ ကပျဖို့ ရူပ ကွိုးစားပါမယျ.. သင်ျကနျးပို့ဆိုလညျး ပို့ပေးပါမယျနျော…pls help me if you can naw 🙏🏻”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ပွောပွခဲ့တာပါ။ ပရိသတျကွီး လညျး ရူပရဲ့အိမျမကျ ဆန်ဒလေးလညျး အမွနျဆုံးပွညျ့ဖို့ဆုေ တာငျးေ ပးခဲ့ပါဦးနျော။ Credit:
ပရိသတ်ြ ကီးရေ ခင်ရူပကေ တာ့ မော်ဒယ်လ်လော ကမှာ အောင်မြင်ခဲ့ တဲ့ သူဖြစ်တဲ့အပြင် အလှမယ် တစ်ယောက် အဖြစ်လည်း လူသိ များခဲ့တာပါ။ အနုပညာအလု ပ်တွေ ကိုအခုချိန်မှာ ရပ်နားထားတဲ့ ခင်ရူပကတော့ အိမ်ထောင်သ ည်ဘဝနဲ့ေ အးချမ်းစွာနေထို င်နေသူပါ။
လက်ရှိမှာေ တာ့ ထူးခြားတဲ့ သူမရဲ့အိမ်မက်အကြော င်းကို ပရိသတ်ေ တွကို ပြောပြခဲ့တာပါ။”Singapore မှ မိတ်ဆွေများ ရှင်.ထူးဆန်းတာလ ည်း အရမ်းပါ..ခုလည်း ဘယ်လိုလုပ်ရ င်ကောင်းမ လည်း အကူအညီေ တာင်းတာပါနော်..လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်က အိပ်မက် မက်ပါတယ်…သေချာပြောရရင် တချို့ story လိုပါထင်နိုင်ေ လာက်တာမို့မပြောေ တာ့ဘူးနော် 😅 highlight လေးဘဲပြောပါမယ်”
“Singapore က လေးမျက်နှာဘုရားေ ရှ့မှာ ကိုရင်(သို့)ဘုန်းကြီး ၂ပါးကို သင်္ကန်းကပ်ပေးရမယ်” လို့ ထင်ထင် ရှားရှားကြီးမိန့် သွားတာပါ .. ပုဂ္ဂိုလ်တော့ မပြောေ တာ့ပါဘူး..အာ့နဲ့ Sg မှာ လေးမျက်နှာဘု ရားရှိမ ရှိစုံစမ်းတော့ ရှိတယ်ပေါ့နော်.. ဒါမယ့် ရူပအိပ်မက် ထဲကလို လေးမျက်နှာ ဘုရားရှေ့မှာ ကပ်လို့ရနိုင် ပါ့မလားဟင်?
ဘုန်းကြီးကျောင်း နဲ့နီးတဲ့ နေရာလည်း တွေ့ထား ပါတယ် .. ဘုန်းဘုန်းတွေ ကို ပြောပြပေးပြီး အကူအညီတောင်းလို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားပေါ့နော်… Sg ဆိုတော့ ဘယ်လိုဘယ် ဝါအထာ ရှိမှန်းရူပလည်း မသိဘူးရယ် 😞
ပြည်တွင်း မှာသာဆိုရူပ ပြေးသွားပြီး အကူအညီတော င်းမိမှာပေါ့နော်.. အရင်အခြေအေ နသာဆို ကျမ ticket ဖြတ်ပြီး ပြေးသွား လိုက်ပါပြီ 😞 ခုတော်တော် စိတ်ဒုက္ခရော က်တယ် သွားမရသေးတော့ ..ဘယ်သူများဒီအိမ်မက်ကို လျှောက်ထားပေးပြီး လေးမျက်နှာ ဘုရားေ ရှ့မှာကပ်လှူခွ င့် ရဖို့ ကူညီပေးနိုင်မလည်းရှင်?
မလွယ်ကူလည်း အားမနာပါနဲ့နော်.. ရူပ က အားနာ ရမှာပါ…အဲ့လို မျိုး ကပ်လို့မရဘူး ဆိုရင်တော့ ခုသိထားတဲ့ လေးမျက်နှာ ဘုရားတည်ရှိရာ နဲ့ နီးတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း မှာဘဲ ကပ်ဖို့ ရူပ ကြိုးစားပါမယ်.. သင်္ကန်းပို့ဆိုလည်း ပို့ပေးပါမယ်နော်…pls help me if you can naw 🙏🏻”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ ပြောပြခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်ကြီး လည်း ရူပရဲ့အိမ်မက် ဆန္ဒလေးလည်း အမြန်ဆုံးပြည့်ဖို့ဆုေ တာင်းေ ပးခဲ့ပါဦးနော်။ Credit:
ပရိတျသတျတှေ မမွငျဘူးသေးတဲ့ သမီးလေးမှေးတုနျးက အမှတျတရ ဓာတျပုံလေးတှကေို ပွနျလညျမြှဝလောတဲ့ သရုပျဆောငျ သကျမှနျမွငျ့